‘वर्क फर्म होम’को समयमा तपाईंको जीवनशैलीमा ध्यान दिनु भएको छ ?:: Naya Nepal
‘वर्क फर्म होम’को समयमा तपाईंको जीवनशैलीमा ध्यान दिनु भएको छ ?
काठमाडौं । नराम्रो बानीले थाहा नै नपाइ स्वास्थ्यलाई बिगार्दछ । स्वस्थ र सुखी जीवन विताउन दैनिक साधारण जीवनशैलीमा यी साना गल्तीहरूमा ध्यान दिन पर्ने हुन्छ । यी १० खराब बानीहरू छोड्नाले डाक्टर र औषधीबाट राहत पाइन्छ ।
मानिसहरू कम्मर मर्काएर बस्नु वा हिड्नु हुँदैन । यसो गर्नाले शरीरको मांसपेशी मात्र होइन मेरुदण्डमा समेत हानिकारक हुन्छ । सधैं कम्मर सीधा राख्नुहोस् । यस कारणले गर्दा, मांसपेशीहरू सन्तुलनमा रहनेछन् र मेरुदण्ड पनि सहि हुनेछ।
‘वर्क फर्म होमको समयमा व्यक्तिहरूले कम्प्युटरको अगाडि घण्टौंसम्म काम गर्नु परिरहेको छ । प्रायः मानिसहरूले यसलाई केवल आँखाका लागि मात्रै नराम्रो भइरहेको भनेर मान्दछन् । यसले हाम्रो हातलाई पनि असर गर्छ । हात र औंलाहरूमा दुखाइ र झिम्काउँदा ’कार्पल टनेल सिन्ड्रोम’ जोखिम बढ्छ। तसर्थ, आँखा र हात दुबैलाई केहिबेर आराम दिनुहोस्।
बजारमा भेटिने जंक फूड वा फास्ट फूडले तपाईंको जिब्रोलाई त सन्तुष्ट पार्छ । तर एकै साथ धेरै रोगहरू साथमा दिन्छ । जंक फूडले छिटो तौल बढाउँदछ र मधुमेह, हृदय रोगलगायत धेरै खतरनाक रोगहरूको निम्त्याउन छ। जंक फूडको साथ धेरै अस्वास्थ्यकर चीजहरू तपाईंको पेटमा जान्छन् ।
अस्वास्थ्यकर जीवनको कारण शरीरमा तनाव हार्मोनहरू द्रुत रूपमा पैदा हुन्छन । तनावको कारण एक व्यक्तिलाई रक्तचाप,मधुमेह र डिप्रेसन जस्ता समस्या हुन सक्छन । यो मात्र होईन बढ्दो वजनको साथ यसले तपाईंको पाचन र प्रतिरक्षालाई पनि असर गर्दछ । यसबाट छुटकारा पाउन, तपाईं ’गहिरो सास फेर्नुहोस’, ’ध्यान’, ’योग’, ’कसरत’ नियमित गर्न सक्नुहुन्छ वा परिवारसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ तब तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।
रक्सीले दुबै शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई असर गर्छ । यसमा कुनै शंका छैन,रक्सीले हाम्रो शरीरलाई ठूलो नोक्सान पु¥याउन सक्छ । मदिराले मात्र कसैको कलेजो बिगार्दैन साथमा हृदय रोग, डिप्रेसन र क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगहरू पनि निम्त्याउन सक्छ ।
हृदय रोग र क्यान्सरबाट हुने ३० मृत्युको जिम्मेवार धूम्रपान बनेको छ। यो मात्र होईन ८०(९० प्रतिशत मानिसहरूलाई धूम्रपानको कारण फोक्सोको क्यान्सर पनि हुन्छ । चुरोट वा सुर्तिजन्य बस्तु खादा मुख, घाँटी वा मूत्राशयको क्यान्सर हुन्छ ।
पेन किलरहरू अर्थात् दुखाइ कम गर्ने ड्रग्स पनि थोरै रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन । यी औषधिको दीर्घकालीन प्रयोग स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ । पेन किलरलाई निरन्तर लिँदा अल्सर, जठरांत्र रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप र हृदयघातको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसकारण, त्यस्ता औषधिहरूको लत नियन्त्रण गर्न सिक्नुहोस् ।
धेरै मानिसहरूलाई बिहानको खाजा खानको बानी हुँदैन । बिहानको खाना नखाई तपाईको स्वास्थ्यलाई कत्ति हानी हुन्छ ? विहानको नास्ता लगातार नगर्नाले तपाईंको सामान्य वजन, हार्मोनल स्वास्थ्य, मेमोरी, हास्य र मुडमा असर गर्दछ । बिहानको खाजामा अभावले मेटाबोलिज्म डिप्रेसन निम्त्याउँछ । जसले मासिनको तौल बढ्ने कारण बन्न सक्छ ।
कम वा अपर्याप्त निद्राका तपाईंको ध्यान कमजोर हुन्छ । अपर्याप्त निद्राले चिडचिडे व्यवहार शुरु हुनसक्छ । डिप्रेसनको समस्या बढ्छ । तनाव हार्मोन बढेको कारण वजन पनि घट्छ । कम सुत्नाले छाला र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा खराब प्रभाव पार्छ ।
कम पानी पिउनका कारण हाम्रो शरीर डिहाइड्रेट हुनथाल्छ । पानीको अभावले सम्पूर्ण शरीरमा नराम्रो प्रभाव पार्छ । यसले थकान, सुख्खा छाला, चिडचिडा र काममा फोकस गुमाउन सक्छ । कम पानी पिउँदा विषाक्त पदार्थहरू शरीरबाट बाहिर निस्कदैनन् । जसका कारण मृगौला र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा प्रभावित हुन्छ ।
कोरोना अनुभवः तीन वर्षीय छोरासँग छुट्टिनु पर्दा…
एनआईसी एशियाको डिजिटल उत्सव योजना, डिजिटल भुक्तानीमा ५० प्रतिशतसम्म छुट